हाम्राे आव्हान : नयाँवर्षमा बालसाहित्यका पुस्तक दान गरौँ – Ketaketi Online
हामीसँग १ हजार बालबालिका सम्पर्कमा छन्, जो बालसाहित्यको पुस्तक पढ्न चाहन्छन् तर किनेर पढ्न सक्दैनन् । आउनुहोस्, यो नयाँ वर्षमा ती बालबालिकालाई पुस्तक दान गरौँ ।हामीसँग नेपाली बालसाहित्यका १ सय भन्दा बढी किताबहरु उपलब्ध छन् । दाता आफैँले भेटेर ती बालबालिकालाई आफ्नो जन्मदिन, आफन्तको जन्मदिन, पितृको सम्झना श्राद्धका दिनमा वा अन्य कुनै विवाह वा अन्य अवसरमा पुस्तक उपहार दिनुहोस् । ती बालबालिकाको यो नयाँ वर्षलाई अविष्मरणीय बनाइदिनुहोस् ।
किताब उपहार प्राप्त गर्ने बालबालिका बालसाहित्य क्लबका सक्रिय सदस्य हुन् । तिनले आफूले पढेका पुस्तकबारे समीक्षा पनि लेख्नेछन् । साथै उदारमना दातालाई पुस्तकहरु पढिसकेपछिको अनुभूतिमा धन्यवाद पत्र पनि लेख्नेछन् ।
सानो सेटको रु. ७५००/- (५० किसिमका किताब) छुटमा रु. ६२५०/-, ठुलो सेटको रु. १५०००/- (१०० किसिमका किताब) छुटमा रु. १२,५००/-
यो कार्यक्रम नयाँ वर्ष २०७९ सालभरि जारी रहने छ । हरेक दाताको परिचय केटाकेटी अनलाइनमा प्रकाशित गरिने छ । यस अभियानमा प्राप्त रकम जम्मा गरी किताब किनेर पढ्न नसक्ने बालबालिकाका लागि सस्तो किताब (रु. ५ मा किताब) प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सम्पर्क : ९८५६० ०३५३१ (केटाकेटी अनलाइन), हाम्रो इमेल : ketaketionline@gmail.com